Sidee ayay u muuqan kartaa Shaxda kooxda Man United xilli ciyaareedka cusub haddii ay la soo wareegto Gareth Bale, Bruno Fernandes & Harry Maguire? – Gool FM
(Manchester) 21 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa weli ku jirta suuqa kala iibsiga xiddigaha waxaana la la xiriirinayaa inay la soo wareegaan xagaagan xiddigo ay ka mid yihiin Gareth Bale, Bruno Fernandes iyo Harry Maguire.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa la soo shirtagi karo xilli ciyaareedka soo socda haddii uu helo saxiixyada uu suuqa ka doonayo ee kooxda la la xiriirinayo.
Kooxda ka arrimisa garoonka Old Traffrod ayaa si weyn u doonaysa daafac dhexe, iyagoo ku dhow inay 80 milyan oo gini ku soo qaataan daafaca naadiga Leicester City iyo xulka England ee Harry Maguire.
Haddii uu Maguire ku soo biiro kooxda Man United waxa uu daafaca dhexe kala garab ciyaari doonaa Lindelof, halka garabaha difaaca ay dheeli doonaan Luke Shaw iyo saxiixa cusub ee Aaron Wan-Bissaka.
Geesta kale kooxda Manchester United waxa ay ku dhow dahay inay la soo wareegto laacibka khadka dhexe ee kooxda Sporting Lisbon & Xulka Portugal ee Bruno Fernandes.
Yeelkeede, xitaa madaxda kooxda Sporting Lisbon ayaa qiray in Fernandes uu qarka u saaran yahay inuu u wareego dhinaca naadiga Manchester United, haddii uu ku soo biiro kooxda reer England waxa uu Fernandes, khadka dhexe ka garab ciyaari doonaan Nemanja Matic iyo Paul Pogba haddii xiddiga Faransiiska uu sii joogo naadiga.
Weerarka haddii aynu eegno Man United haddii ay la soo saxiixato weeraryahannada ay suuqa ka doonayso isbedel ayaa ku dhici doona dhankeeda weerarka, waxaana la la xiriirinayaa kooxda dhaliyaha kooxda Real Madrid ee Gareth Bale oo macallin Zidane uu sheegay inuu baxayo iyo sidoo kale xiddiga kooxda Lille ee Nicolas Pepe.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegeynaa sida ay u muuqan karto shaxda kooxda Manchester United xilli ciyaareedka soo socda haddii ay hesho afarta saxiix ee ay doonayso.